Iwo akanakisa mafomu ekugadzira masiraidhi eApple uye iPhone 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Zvirongwa zvekugadzira kutsvedza Ivo vari kuwedzera kudiwa nekuda kwekuti chero munhu anogona kunzwa kunge nyanzvi inoshandura mafoto avo aine mamwe mhedzisiro uye achigovana navo "ruzhinji".
Zvinhu zvakasiyana zvinogona kukanganisa kusarudzwa kwekushandisa kushandisa, senge:
la mhando yemhedzisiro- Yese app inokodzera munyu wayo inofanira kupa yakawanda yakanaka mhando, kunyange zviri pachena kuti isu hatifanire kufunga kuti kuita kumwe, kunoshamisira sezvingave kuri, kunogona kukwana kuti kugadzire rakapenga raidhi;
la kureruka kwekushandiswa: iyo mirairo uye yekushandisa inofanira kunge iri intuitive yekuita kuti basa rive nyore kune vashandisi;
la nyore kugovana: zvekugovana sarudzo zvinofanirwa kuve zvinosvika .... tinya !!
Muchikamu chino, isu tichaedza kupa dhairekitori rinobatsira kune vese avo vanoda kuyedza mhanza yavo nema slideshow application nekutsanangura zvavari, zvayakanakira nezvayakaipira. Kuita kuti zvinhu zvive nyore, isu tichaganhura chinyorwa kuita zvikamu zvitatu, imwe yakatsaurirwa chete kune vashandisi Android, imwe yakatsaurirwa chete kune vashandisi iPhone uye imwe yakatsaurirwa kune aripo masiraidhi ekushandisa mu zvese Versions
VERENGA ZVIMWE: Makumi matatu emapurogiramu ekugadzirisa mavhidhiyo uye kugadzirisa mafirimu (Android uye iPhone)
Iyo yakanakisa slideshow app yeApple
a) Mufananidzo FX Live Wallpaper:
Pasina kupokana, ndiyo inonyanya kufarirwa kunyorera muindasitiri ine anopfuura gumi nemamirioni gumi ekurodha pasi.
Iko kunopa kunopa akawanda mabasa, achikubvumidza iwe kurodha mapikicha, dhizaini masiraidhi, wedzera mifananidzo, isa mavara, mhedzisiro, uye zvimwe zvakawanda. Mufananidzo FX Live Wallpaper Iyo ine yakanakisa pikicha mupepeti, inogadziriswa, uye inokutendera iwe kuti ugadzire emhando yepamusoro mapikicha. Uye zvakare, iri intuitive uye nekudaro iri nyore kushandisa kunyangwe kune vasina ruzivo.
Zvakaipira zvinosanganisira kusakwanisa kuburitsa kamera nekushandisa inomhanya, iyo tsika yekudonha kana paine akawanda mafolda akavhurika, uye kushomeka kwe otomatiki foto kutenderera.
Chepiri) Mufananidzo slideshow uye vhidhiyo inogadzira:
Ichi chishandiso chinopa chaiyo yakanyatsoita slideshow yekugadzira ruzivo nekuda kwekubatanidzwa kweiyo intuitive interface uye epamberi maturusi.
Mufananidzo slideshow inopa huwandu hukuru hwemhedzisiro, mafirita uye mafuremu, ichiperekedzwa neyakareruka zvemukati manejimendi izvo zvinoita kuti zvive nyore kugadzira mhando yemasiraidhi ekuwedzera nekuwedzera iwo clip arimo mune gallery mune akasiyana maforodha. Panguva imwecheteyo, zvinonetsa kugovana mavhidhiyo akachengetedzwa; zvakare, mhando yemhando inochinja maererano nedanho rakasarudzwa.
C)PIXGRAM - Mumhanzi Photo Slideshow:
Iyi slideshow maker app inoita kuti zvive nyore kuti chero munhu aise mapikicha, sarudza mimhanzi yavanofarira, wedzera mafirita uye mhedzisiro, vagadzire yavo yavo slideshow uye vagogovana nayo nenyika uye iri chaizvo rakanakira app kune vanotanga.
Pixgram inokutendera kuti uchengetedze masiraidhi mumafomati akasiyana, iine yakasarudzika mafirita, uye inoda kushandiswa kwemimhanzi yako wega. Inogona kunge isiri iyo yehunyanzvi app pamusika, asi inoita basa.
re) Musiki wekupa:
Musiki wekupa haina kunakidzwa nekuzivikanwa kwezvikumbiro zvakapihwa munzvimbo dzakapfuura, asi inopa mikana inoshamisa kwazvo kune avo vari vatangi mukugadzirwa kwemasiraidhi: nekutenda kune yakasarudzika intuitive interface, zviri nyore kwazvo kurodha mapikicha, kuvatsvaga, kugadzirisa kutamba random uye nezvimwe zvakawanda. Iko kune zvakare widget ye otomatiki foto yekugadzirisa, iyo inokutendera iwe kuti uwedzere nyowani.
Kune rimwe divi, kugonesa iyo yakasvibirira ficha inowanzo tenderera uye haina maficha ayo maapplication ari muchikamu chimwe chete anopa.
Zuva rezuva chishandiso chakagadzirirwa nyanzvi vapepeti uye chinopa vashandisi chishongedzo-chakafuma pasuru, ichiperekedzwa neye yakanakisa inogadziriswa menyu uye yekudyidzana dhizaini. Iko kunyorera kunogona kushandiswa online uye zvinokwanisika kugadzira mhando yemasiraidhi, uchishandisa akasiyana mabasa kupa ako masiraidhi bata rakasarudzika.
Nehurombo, Dayframe inowanzo kukweva bhatiri rechishandiso riri kushandiswa munguva pfupi uye zvinogona kunetsa kune vanotanga kushandisa.
Iyo yakanakisa slideshow app ye iPhone
PicPlayPost chishandiso chinonzwisisika icho chinokutendera kuti uise pamwe chete mafoto, mavhidhiyo, mimhanzi uye maGIF, ichiita imwe yeanonyanya kufarirwa mafomu erudzi rwayo. Iko kunyorera kunowanikwa kune chero munhu uye kunopa inoshanda mabasa ekubatana nyore mavhidhiyo nemifananidzo.
PicPlayPost Iyo ine yakajeka intuitive interface iyo inokutendera iwe kuti uise kusvika kune mapfumbamwe mapikicha, GIF kana mavhidhiyo purojekiti uye uite kuti zvinyanye kufadza nesarudzo yakanaka yemhedzisiro yekugadzirisa.
Mumhanzi wakasarudzika weSlideshow uye kushandisa watermark kune slideshow, kunyangwe ichigadziriswa, haina kunakidza.
SlideLab inokutendera iwe kushandura mapikicha kuva mavhidhiyo mumaminetsi mashoma nekuisa yakasanganiswa kana yetsika mumhanzi mune iko kunyorera. Masiraidhi akagadzirwa anogona kuchengetwa panharembozha, achichengeta saizi yepakutanga, kana kugovaniswa pamaprofiles avo eruzhinji akatogadziriswa kugadzirisa kunodiwa nesocial network mavanoda kugovana. Iko kunyorera kunopawo akasiyana siyana mafirita ekushandisa kune ako mifananidzo.
Kukanganisa chete SlideLab haibvumiri kushandisa mimhanzi na iTunes kugoverana Facebook O Instagram. Icho chichiri chisarudzo chakasiyana.
C) Mufananidzo Mharidzo Director:
Mharidzo director inobvumira iyoiPhone / iPad kuva chikuva chemasiraidhi, uchishandisa iwo mapikicha akachengetedzwa pane chishandiso. Huwandu hwemhedzisiro yakapihwa hunonakidza, kunyanya uchifunga kuti iko kunyorera kunokutendera iwe kusevha masiraidhi mukati HD kunyangwe yakazara skrini. Uye zvakare, iko kunyorera kunokutendera iwe kuti ugovane masiraidhi pamasocial network pasina kunetseka.
Mharidzo director Iyo ine yakapusa uye inonzwisisika pikicha mupepeti uye zvakare inokutendera iwe kuti ugadzire mimhanzi mavhidhiyo.
Pane zvinopesana, kumhanyisa kumhanyisa kunogona kukanganiswa nekurangarira kweiyoiPhone. Kunyangwe izvi, ichiri nharo kuti akanakisa emuoni wesiraidhi mugadziri unowanikwa iOS.
Picflow Iyo haina zvese maficha izvo zvimwe zvinoshandiswa zvinopa, asi iko kunyorera kuri nyore kubata nekudzora kana uchigadzira masiraidhi. Iyi Anwendung inokutendera iwe kumisikidza iyo yekutamba nguva yemumwe neumwe wakaiswa pikicha uye wozoironga kupururudza neyako yakasarudzwa kumashure mimhanzi iyo inogona zvakare kuiswa kubva kuneiPod.
PicFlowMumaminetsi mashoma, zvinokutendera iwe kuti ugadzire zvine simba uye zvine hupenyu maficha ekugovana paFacebook kana Instagram, kutsemura iyo mifananidzo neiyo slide uye pini basa uye kushandisa imwe ye18 inowanika shanduko.
Nehurombo iyo yemahara vhezheni iri shoma uye iyo vhidhiyo encoding haina kuenda kumberi 30 FPS.
iMovie inopa huwandu hwakawanda hwezvinhu uye nehupamhi hwehunhu, ichiita imwe yeakanakisa mafomu ekugadzira masiraidhi e iPhone. Iko kunyorera kunokutendera iwe kuti uchinje odhiyo yeimwe clip yaunogadzira uye inopa akasiyana siyana emitambo yemamuvhi, shanduko, mhedzisiro uye mazita. Nezvikonzero izvi, vashandisi vazhinji vanofuratira mamwe mashandisirwo uye vanoshandisa iMovie kune zvese zvinodiwa zvine chekuita nekugadzirisa vhidhiyo kana kugadzira masiraidhi.
Izvo zvikonzero nei iyi app yakagadzirirwa iPhone ndeimwe yeakanakisa ekugadzira masiraidhi. Kune rimwe divi, iko kunyorera hakusi kuchinjika uye kunonetsa kubata kune vanotanga.
VERENGA ZVIMWE: Gadzira mavhidhiyo emifananidzo, mimhanzi, mhedzisiro senge pikicha yesiraidhi kubva paPC
Yakanakisa Slideshow Mapurogiramu eApple uye iPhone
Inowanikwa kune ese maviri majaira Android izvo zve iPhone , VivaVideo ine yekutanga vhezheni iyo iwe yaunogona kushandisa uye kurodha mahara. Paunenge uchigadzirisa yako mifananidzo, unogona kusarudza kubva kune imwe "pro mode" yekuchinjika kukuru uye "fast mode" yeshanduro inokurumidza uye yakawanda. Iyo kamera mune yekushandisa inokutendera iwe kuti utore mavhidhiyo iwe uchizadza anopfuura makumi matanhatu akasarudzika mhedzisiro. Ipapo iwe unogona kuwedzera shanduko, mhedzisiro, uye kunyangwe kuteedzera vhidhiyo yawakaita.
Paunenge uchibuda muapp, shanduko dzako dzinozoponeswa otomatiki uye unogona kusanganisa zviri nyore mavhidhiyo kuburikidza nechinhu chebhodhi renhau.
Nehurombo, iyo yemahara vhezheni yeapp iyi inosanganisira isinganzwisisike watermark pane mavhidhiyo, inoratidzira yakawanda kushambadzira, uye maminetsi mashanu-maminetsi ekutsvedza. Kuti ubvise kushungurudzika uku, unofanirwa kutenga iyo pro vhezheni ye $ 2,99,3.
Inowanikwa kune vese vashandisi Android kune vese vashandisi iPhone uye inopa matani esarudzo ekugadzirisa masiraidhi, mapikicha, mavhidhiyo, uye zvimwe. Movavi Iyo yemahara, uye yayo yevhidhiyo uye odhiyo edhisheni inopa yehunyanzvi ruzivo, pamwe nekukwanisa kusanganisira yemhando yepamusoro mhedzisiro uye kushanda nemazhinji akasiyana mavhidhiyo mafomati. Izvo zvinokwanisika kumisikidza ruzha, rekodha zvakananga kubva pachiratidziro kutora mavhidhiyo kufona kana zvimwe zviitiko zvinoitika munguva chaiyo pane chako chishandiso uye kunyangwe digitally inogadzira kana kudzosera pikicha zviri nyore.
Kune zvekare zvimwe zvinotonhorera maficha sekugona kwekugadzira tsika zvinyorwa zvidiki. Movavi Iyo zvakare inowanikwa mune yakabhadharwa vhezheni, ine sarudzo shoma buda mukati $ 59,95. Vamwe vashandisi vakawana maturusi akaoma kushandisa kunze kwekunge vari tech-savvy.
Inowanikwa kune ese ari maviri Android izvo zve iOS uye chishandiso chakakwana chekugadzira mharidzo dze Instagram newsfeed nekuti inogadzira vhidhiyo kuita sikweya. Nekudaro, kusvika parinhasi, ine mufananidzo fomati sarudzo yakanakira Instagram uye nokuda IGTV. Iyo yemahara vhezheni yeapp iyi inoganhurira sikweya pikicha inotsvedza nemasekondi makumi matatu uye yakatwasuka pikicha slideshow kumasekondi gumi nerimwe, zvinova zvinoshungurudza.
Zvese muzvese, MoShow zvichave zvakaoma kushandisa pasina kuisa mari mune pro vhezheni. Iko kunyorera MoShow kuzadza mahombekombe $ 5,99 pamwedzi kana $ 35,99 negore.
Sezvo iwe uchigona kufungidzira zviri nyore, kune akawanda mafomu akatsaurwa ekugadzirisa mapikicha nemavhidhiyo uye zvinowanzo kunetsa kunzwisisa uye kusarudza kuti ndeapi akakodzera pane zvatinoda uye kuzvitsanangura zvese.
Takaedza; Iye zvino izvo zvasara ndezve kudzika kubhizinesi!
VERENGA ZVIMWE: Kunyorera kugadzira nyaya kubva kumifananidzo nemimhanzi mavhidhiyo (Android - iPhone)